Turkey meghere Gates na Europe maka ndị Siria
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Turkey meghere Gates na Europe maka ndị Siria
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na-agbasa News Travel • Crime • News • Akụkọ na -agbasa Syria • Turkey na -agbasa News • Akụkọ dị iche iche
Europe nọ na nche, ọ bụghị naanị maka Coronavirus mana maka ndị gbara ọsọ ndụ si Syria na-abanye na mpaghara Schengen.
NATO "Onye Mmekọ" Turkey ga-ekwe ka ndị gbara ọsọ ndụ hapụ obodo ya ka ọ na-ebido ọrụ agha na Syria, gọọmentị Turkey kwuru na Sọnde n'etiti ụjọ nke ọtụtụ narị puku ndị gbara ọsọ ndụ na-abanye Turkey site na Syria n'ihi mwakpo ndị Syria na-akwado Russia.
“Anyị agbanweela iwu anyị, anyị agaghị egbochi ndị gbara ọsọ ndụ ịhapụ Turkey. Nyere ikike anyị na ndị ọrụ anyị pere mpe, anyị na-elekwasị anya na ịhazi atụmatụ maka ihe ga-eme ma ọ bụrụ na anyị enwee ike ịbata na Syria kama igbochi ndị gbara ọsọ ndụ bụ ndị bu n'obi ịkwaga Europe, "ka Fahrettin Altun, onye nduzi nkwukọrịta maka onye isi ala nke Turkey President Recep Tayyip Erdoğan kwuru.
Turkey na-ekwu na ya enweghị ike ịnabata ndị gbara ọsọ ndụ ebe ọ na-anabata ndị gbara ọsọ ndụ Syria nde 3.7, karịa mba ọ bụla ọzọ.
Erdoğan eyiwo egwu ruo ọtụtụ ọnwa nke "imeghe ọnụ ụzọ ámá" nke Mbugharị na European Union ma ọ bụrụ na ọ kwadoghị atụmatụ maka "mpaghara nchekwa" na Syria ebe Turkey chọrọ ịlaghachi otu nde ndị Siria.
Mwakpo nke Onye isi ala Syria onye nkwado Bashar al-Assad weghaara iji weghara ebe kachasị ike na Syria emeela ka ọtụtụ narị puku mmadụ gbagoo ókèala Turkey.
Nnyocha e mere na-egosi na ọtụtụ ụmụ amaala Turkey chọrọ ka ndị gbara ọsọ ndụ Siria mechara laghachi Syria na oke iwe maka ha bụ ihe kpatara oke mmeri nke ndị otu Erdoğan na agbụrụ mayoral nke afọ gara aga maka Istanbul.
Mịnịsta na-ahụ maka ime ihe na Turkey kwuru na Sọnde na ndị njem 76,358 hapụrụ Turkey site n'otu ngafe na ókèala na Greece.
Ọnụ ọgụgụ sitere na isi mmalite ndị ọzọ etinyela ajụjụ na izi ezi nke nkwupụta ahụ.
Organizationtù Mba forwa Maka Mbugharị kwuru na ihe karịrị mmadụ 13,000 kwabatara n'akụkụ ókèala Turkey na Greek site na mgbede Satọde.
Otu onye ọrụ gọọmenti Gris kwuru na "e nwere nnwale 9,600 iji mebie ókèala anyị, ma emeri ha niile nke ọma," ụlọ ọrụ mgbasa akụkọ Reuters kwuru.
Nkwupụta sitere n'aka onye isi oche nke European Council kwuru na EU dị njikere inyekwu enyemaka ndị mmadụ na-echekwa ókèala ya na Gris na Bulgaria, ha abụọ gbara Turkey.
Ọtụtụ European Union bụ akụkụ nke Mpaghara Schengen, ebe ndị mmadụ nwere ike ịgafe na-enweghị nlele paspọtụ ozugbo na mpaghara ahụ. Gris na Bulgaria, nke dị na Turkey, bụ ebe ntinye na Mpaghara Schengen.
Marksbọchị Sọnde bụ akara ụbọchị mbụ kemgbe ụbọchị ngwụcha nke ndị agha Assad kpebiri ịlaghachi na Idlib.
Defenselọ ọrụ nchekwa nke Turkish kwuru na Turkey malitere Operation Spring Shield na Idlib na mmegwara maka mwakpo ahụ n'abalị Tọzdee gburu ndị agha Turkey iri atọ na atọ, ụlọ ọrụ mgbasa ozi steeti Turkey kwuru.
Ryan Bohl onye nyocha nke Middle East na North Africa na Stratfor, otu ndị na-ahụ maka ndụmọdụ zuru ụwa ọnụ, ekwenyeghị na ọ ga-abụ na Turkey ga-ebido mwakpo ndị agha buru ibu, ọ bụ ezie na ọgụ megide ndị agha ọchịchị ga-aga n'ihu.
“Ọ na-egosi na Ankara ekwenyeghi na ọ ga-ewepụ akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị,” Bohl gwara The Media Line.
Bohl kwuru na ọ bụrụ na Russia gbadaa Turkish drones, a ga-ahụ ya dị ka mmụba ọzọ n'ihi na ọ ga-abụ kọntaktị ndị agha n'etiti akụkụ abụọ ahụ.
"Ọ bụ okirikiri nke ịrị elu na Turkey agaghị adị njikere ịbanye," ka o kwuru. "Ha na-anwa ịmanye onye nke ọzọ ka ọ bido ịmalite nkewa."
Muzaffer Şenel, osote prọfesọ nke sayensị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta mba ụwa na Mahadum Istanbul Şehir, kwuru na ebumnuche Russia bụ ime ka Turkey kwenye ka ya na Assad nwee mkparịta ụka mana Moscow dị njikere ịhapụ njikọ ya na Ankara iji lekọta ndị ha na Damaskọs anya.
Russia na Turkey na-eme ka mmekọrịta ha na ike na ngwa agha na-emebi mmekọrịta nke Ankara na West na NATO.
Nzụta Turkey n'afọ gara aga nke usoro ngwa agha Russia rutere ikpe siri ike site na njikọ ndị agha na Washington dọọ aka ná ntị banyere mmachi megide Ankara.
Ndị na-eme nnyocha kwenyere na Erdoğan na-achọ ịnwe amụma mba ofesi ọzọ nke Turkey anaghị adabere kpamkpam na NATO.
Agbanyeghị, ọgbaghara dị na Idlib emeela ka Turkey banye nso na West ma na-agbanye ndị mmekọ NATO maka nkwado ọzọ na Syria, ọkachasị maka US Patriot missiles nke Ankara jụrụ ịzụta n'afọ gara aga maka ngwa agha Russia.
Erdoğan na onye isi ala France Emmanuel Macron kwurịtara okwu n’abalị Satọdee, na-arịọ maka usoro jikọrọ aka nke NATO, dị ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi steeti Turkey kwuru.
Akụkọ ahụ kwuru na Macron gwara Russia ka ọ kwụsị mwakpo ya na Idlib.
Şenel kwuru na Turkey ga-ejedebe na nzaghachi ndị agha ya na Idlib n'ihi na ha enweghị ike ikuku iji chebe ndị agha ala ya mana ọ ga-aga n'ihu na mwakpo ya megide ndị agha ọchịchị Syria n'ihu mkparịta ụka na Moscow.
“Ọ bụrụ na [ịchọrọ] ịdị ike na tebụl,
kwesịrị ịdị ike n'ala, "Şenel dere na ozi nke Media Line.
"Plangbọ elu ga-atụ ogbunigwe ndị agha ala Turkey na enweghị nkwado NATO ma ọ bụ usoro nchekwa ikuku, nhọrọ [dị ka] oke oke," ka ọ gbakwụnyere.
Site na Kristina Jovanovski / Usoro Media